Soo dejisan Panda Dome Premium 20.00.00 – Vessoft
WindowsAmnigaDifaac guudPanda Dome Premium
Bogga rasmiga ah: Panda Dome Premium
Panda Dome Premium – waa ficil buuxa oo leh difaac dhamaystiran oo leh heer ilaalin heer sare ah iyo qalabyo dheeraad ah oo la xariira asturnaanta. Software wuxuu taageersan yahay dhowr nooc oo baaritaan ah si loo ogaado hanjabaadaha iyo xayiraadaha anshaxa si looga hortago dhaqdhaqaaqyada laga shakisan yahay inay si xun u saameynayaan kombuyutarkaaga. Panda Dome Premium wuxuu ilaaliyaa macaamil dhaqaale iyo qarsoodi ah internetka oo ka dhan ah weerarrada websaydhka, ransomware iyo website-ka phishing, taas oo ay ugu wacan tahay dukumiinti shakhsi ahaaneed iyo nidaam fara badan oo shabakadeed. Barnaamijka waxaa ku jira dhowr qalab oo dheeri ah: VPN, faylka feylka, kormeerka geedi socodka, maamulaha sirta, xariirka waalidka, xakamaynta faylka, ilaalinta barnaamijyada, ilaalinta USB, iwm. Panda Dome Premium waxay baaritaan ku sameysaa ammaanka xidhiidhada wirelesska waxayna bixisaa warbixin faahfaahsan oo lagu baarayo si loo wanaajiyo amniga oo loo yareeyo fursada lagu xirayo shabakadaha infekshanka WiFi. Sidoo kale, Panda Dome Premium waxay taageertaa qalab lagu nadiifiyo, la kiciyo, lana hagaajiyo waxqabadka kombuyuutarka.
Ilaalinta xogta oo kordhay
Ammaanka Internetka iyo ilaalinta WiFi
Maamulaha password iyo faylka codka
VPN aan xadidnayn
Soo dejisan Panda Dome Premium
Faallo ku saabsan Panda Dome Premium
Panda Dome Premium Xirfadaha la xiriira